व्यावसायिक विमानहरु मा उडान को वृद्धि परेशानी निजी जेट चार्टर गर्न बढी मान्छे ड्राइभिङ छ. लामो भन्सार लाइनहरु, Tsa सुरक्षा जाँच, भीड विमानस्थलको, बस व्यावसायिक जेट मा उडान को असुविधाहरु केही छन्. सामान्यतया प्रथम श्रेणी वा व्यवसाय वर्ग उड गर्ने मानिसहरू अहिले झन् निजी जेट चार्टर को अर्थशास्त्र मा देख रहे. तथापि, व्यावसायिक एयरलाइन्स संग विपरीत, यसको एक जेट chartering को लागत पत्ता लगाउन सजिलो छैन. त्यसैले यहाँ हामी प्रश्नको जवाफ: कति यो चार्टर एक निजी जेट गर्न खर्च गर्छ?
हामी प्रदान अन्य सेवा
एक जेट chartering को लागत प्रति उडान को घण्टा डलर दिइएको छ. रूपमा अपेक्षित, लागत विमान को विभिन्न मोडेल बीच भिन्न हुन्छ. केही विमान शानदार छन्, जबकि छैन अरूलाई भनेर विलासी छन्. केही विमान अधिक एक दर्जन यात्रु लागि ठाउँ छ, सानो व्यक्तिहरूलाई छ जबकि केही चार रूपमा यात्री सिट मात्र.
बजार मा सानो चार्टर विमान एक Cessna उद्धरण मुस्ताङ छ, जो बारेमा सीट गर्न सक्नुहुन्छ 4-5 यात्रु. यो पनि चार्टर गर्न सस्ता विमान हुन हुन्छ: तपाईं चार्टर गर्न सक्छन् लागि एक Cessna उद्धरण मुस्ताङ $1700 प्रति उडान को घण्टा.
केही हदसम्म यो उद्धरण मुस्ताङ भन्दा ठूलो भएको Learjet छ 60, जो सम्म सीट गर्न सक्नुहुन्छ 8 यात्रु. विचिटा मा Bombardier एयरोस्पेस द्वारा, कन्सास यो तपाईं बारेमा खर्च हुनेछ $3400 प्रति Learjet चार्टर गर्न उडान को घण्टा 60.
उच्च अन्त मा Gulfstream जस्तै एक विमान छ 550, जो लागत बारे $8600 प्रति उडान समय को घण्टा. यो बारेमा सीट गर्न सक्ने एक बिट मद्दत गर्छ 14-19 यात्रु.